I-Sweet Home Serres premium yokuphila
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguGiorgos
IKHAYA ELISWET SERRES Ukuphila okuPhakamileyo
Ukusuka kwi-1 ukuya kwi-3 igumbi kwiindwendwe ezi-1 ukuya kwi-7, amagumbi okulala ayi-3, iibhedi ezinkulu ezi-2, iibhedi ezi-2 zabantu abangabodwa
(Yongeza ibhedi enye yondwendwe lwe7)
Igumbi lokuhlambela eli-1, ikhitshi
Igumbi eli-1 ukuya kwi-3 yeendwendwe ezi-1-7, amagumbi okulala ayi-3, iibhedi ezi-4.
Ikhitshi elinegumbi elinye kunye negumbi lokuhlambela. Kodwa ngenxa yokuba kukho amagumbi amathathu unokubhukisha umntu omnye ukuya kwaba-6 okanye abasi-7 kwigumbi lokuhlambela elinye, amabini okanye amathathu, ekhitshini. Ixabiso elikhankanywe ekuqaleni kukuqasha igumbi (lomntu omnye okanye ababini) lihlengahlengiswa kwi-euro ezingama-20 umntu ngamnye emva kwe-2 okanye xa abantu be-2 beza kusebenzisa amagumbi amabini okanye xa kusetyenziswa igumbi lesibini okanye lesithathu. Le ndlu ibekwe kumgangatho we-4 kanye kwindawo ekumbindi weSeres. Isixeko siphela sisezinyaweni zakho. Yonke into isecaleni kwakho xa uphuma endlwini. Iqukethe amagumbi okulala ama-3, eyokuqala enebhedi enkulu yokumkani (2.09-1.90), eyesibini inebhedi enkulu ephindwe kabini (2.09-1.70) neyesithathu ineebhedi ezi-2 ezingatshatanga. Zonke iibhedi zinomandlalo ukuze ukwazi ukuwususa xa ufuna umatrasi oqinileyo. Enye ibhedi enye ingongezwa ukuze kuhlaliswe umntu wesi-7. Bath ngeetawuli zamanzi ashushu isomisi iinwele, ishampu.
I-intanethi ye-WiFi yasimahla, i-intshi ye-50 ye-smart tv kwigumbi elikhulu kunye ne-32 intshi ye-smart tv kwamanye amagumbi eNetflix, intsimbi.
Ikhitshi enomenzi wekofu yekofu yesiFrentshi, i-cappuccino espresso, ikofu yamaGrike, ikofu kunye neti elungelelaniswe nefriji, ihob kunye neketile yasekhitshini, i-toaster, ngoko ukuba ufuna ukulungisa ukutya kwaye uyonwabele nokuba kwigumbi lokutyela elikhulu labantu abayi-6 okanye kwi-terrace. elibheke isikwere urhwebo Serres eziphambili.
Ifulethi elipheleleyo (igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi). Unokwenza ugcino ukuya kuthi ga kwi-6 okanye abantu abasi-7 kwigumbi elinye, amabini okanye amathathu, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. Ixabiso elikhankanyiweyo lelokubhukisha igumbi (lomntu omnye okanye ababini) linokulungelelaniswa kwi-euro engama-20 ngomntu ngabantu abangaphezu kwesibini okanye ukusetyenziswa kwegumbi lesibini. Igumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu, iitawuli zesomisi enwele ishampu yeWiFi yasimahla, i-smart tv 50 'Netflix, i-iron.Igumbi lokuhlambela likumgangatho we-4 kumbindi wesguare wedolophu yaseSerres.
Iqukethe amagumbi okulala ama-3 enye enebhedi enkulu (2,09-1,90) enye inebhedi enkulu ephindwe kabini (2,09-1,70) neyesithathu inebhedi ezimbini ezingatshatanga. Kungongezwa enye ibhedi ukuze kubekho umntu wesixhenxe. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ukulungiselela i-French cove capouchin kunye neti enefriji, i-hotplate, i-cuttery kunye nempahla yasekhitshini ukuze iindwendwe zilungiselele ukutya kwaye zizonwabele nokuba kukwitafile enkulu (yabantu abathandathu) okanye kwibalcony exabisa imbono yombindi “Emporiou sguare” we-SERRES.
50" HDTV ene-I-Netflix
4.92 · Izimvo eziyi-50
Indlu ibekwe kanye kumbindi weSeres. Kukho amanyathelo ambalwa ukusuka ekungeneni kwi-elevator. Nje ukuba uphume endleleni yonke into isezinyaweni zakho. Ikofu, i-ouzo, iivenkile ezinkulu, iindawo zokubhaka kwaye ngokubanzi zonke iintlobo zeevenkile. Indawo ekungenwa kuyo yenye yeepaki ezisembindini wesixeko. Awunakusebenzisa nayiphi na imoto kuhambo lwakho kuba yonke into ilungile ecaleni kwakho.Kwiimitha ezimbalwa ungaya ekunene okanye ekhohlo usendleleni enkulu yaseSeres apho intliziyo yolonwabo yesixeko ibetha. Iilali ezinemifanekiso (Darnakochoria) ezijikeleze isixeko ezinoyilo lwemveli zibonelela ngobuhle kunye nokutya okumnandi.
Le ndlu ibekwe kumbindi weSerres. Yonke into onokuthi uyifune kwiivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile ezinkulu, indawo yokubhaka kunye naluphi na uhlobo lwevenkile ikumgama wokuhamba ukuze ukonwabele ngokupheleleyo utyelelo lwakho eSERRES ngaphandle kokusebenzisa imoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Giorgos
Ονομάζομαι Γιώργος Μαζνίκης και είμαι εκπαιδευτικός, συγκεκριμένα δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο. Με πολύ μεράκι ετοιμάσαμε ένα ευχάριστο χώρο που συνεχώς βελτιώνουμε για την όσο το δυνατόν καλύτερη και ευχάριστη διαμονή σας.
Ndisesandleni sakho kulo naluphi na ulwazi olunento yokwenza nokuhlala kwakho kunye nokuzonwabisa kwakho.
Ndiza kukunika naluphi na ulwazi malunga nokuhlala kwakho kunye nokuzonwabisa kwakho.
Inombolo yomthetho: 00000597988